एकै दिन थपिए १०९६ संक्रमित, २६२ निको, ८ जनाको मृत्यु - Jana Prashasan
काठमाडौं । आइतबार एकै दिन थप १ हजार ९६ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले ५ हजार ८४ पीसीआर परीक्षणमा १ हजार १५ जनामा र ६९९ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गराउँदा ८१ जना गरी कुल १ हजार ९६ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको पुष्टि गरेका हुन् ।
आज थपिएका कुल संक्रमितमध्ये काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्र ४३५ छन् । तीमध्ये काठमाडौँमा ३२६, ललितपुरमा ६४ र भक्तपुरमा ४५ जना छन् ।
प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार २४ घण्टाको अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट थप ८ जनाको मृत्यु भएको छ । यो सहित नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३ हजार ८३ पुगेको छ । यस अवधिमा २६२ जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। यसरी अहिलेसम्म निको हुनेको संख्या २ लाख ७५ हजार ३०० पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
त्यसगरी अहिले देशभरमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको ६ हजार २९० पुगेका छन् । तीमध्ये ११६ जना आइसीयूमा र ४६ जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन् भने क्वारेन्टाइनमा ८५ जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा हालसम्म संक्रमित हुनेको कुल संख्या २ लाख ८४ हजार ६७३ पुगेको छ ।